Efa nisy dinika vita momba izany teo aminy sy ny filoha Andry Rajoelina, hoy ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Hapetraka mazava ny karama amin’ny maha mpanazatra azy. Efa mitempo ho an’i Madagasikara rahateo ny fony, ary miraiki-po tanteraka aminy ny mpilalao, izay anisan’ny antoky ny fahombiazana. Hojerena dieny izao ihany koa ireo katita hoavin’ny kitra Malagasy amin’ny fananganana Akademiam-pirenena ary hitondra ny traikefany amin’izany i Dupuis, izay efa lasa “Patron’aomby” amin’ny maha mpiandry mahatoky ny Barea azy. Klioba miisa 3 farafahakeliny no efa mitsirika sy te haka azy noho ny fahombiazana entiny amin’ny Barean’i Madagasikara. Tena hafa raha samy mpanazatra izy noho ny fifandraisana am-po teo aminy sy ny mpilalao, ary anisan’ireo voalaza ho niala vola am-paosy mihitsy mba hahazoana fahombiazana sy handehanana lavitra kokoa, ka izao mioty ny vokatra izao ankehitriny.